8-da Farood ee ugu Wanaagsan Qoryaha Qoraaga | Hal-abuurka khadka tooska ah
8-da Farood ee Qoraaga ugu Fiican
Inkastoo ay joojiyeen isticmaalkooda dhowr sano ka hor, Waxaa weli jira melancholies raba inay ka soo kabtaan qorista makiinada, ma aha oo kaliya sida walxaha qurxinta, laakiin sida hiwaayad, taas oo lagu soo celinayo mashiinka oo loo isticmaalo.
Cadaadiska mid kasta oo ka mid ah furaheeda waxay ahayd dadaal ay hal-abuuro badan oo hadda ka bilaabmaya adduunka naqshadaynta weligood ku raaxaysan doonin. Oo waa taas, typography of typewriters waa cunsur lagama maarmaan ah marka la naqshadeynayo, waxay ku xiran tahay waxa qoraallada.
Nashqado badan, oo aan helin mashiinnada noocan oo kale ah, waxay u baahan yihiin inay helaan farta saxda ah ee ilaalinaysa nuxurka makiinada, kuwii hore, taasina waa sababta aan maanta u ururineyno xulashada ugu fiican. farta wax lagu qoro.
1 Waa maxay farta wax lagu qoro?
2 farta wax lagu qoro
2.1 Qoraha Maraykanka
2.3 Lucida Qoraaga Qoraaga
2.5 Xafiiska Sans
2.6 Qoraaga Tesis
2.8 Mashiinka wax lagu qoro ee la tirtiray
Waa maxay farta wax lagu qoro?
Farta wax lagu qoro, ama sida sidoo kale loo yaqaan, farta wax lagu qoro, ayaa ka mid ah inta badan la isticmaalo marka laga shaqaynayo naqshadaynta canabka. Inkasta oo makiinadaha wax lagu qoro ay muddo dheer ka maqnaayeen istuudiyooyinka naqshadaynta, haddana waxaa jira dad badan oo jecel wejigan.
Waxaa jira dhowr farood oo wax qori ah, taas oo ah, mid kasta oo iyaga ka mid ah ayaa kala duwan. Nooca nooca guud ahaan loo isticmaalo in lagu dayo fartii asalka ahayd waa a typography oo leh muuqaal qadiimi ah, oo xiran, oo leh xoogaa muuqaal ah.
Waa qoraal leh hal dhinac oo ay wadaagaan, inkastoo ay kala duwan yihiin, haddana waxay leedahay a ballac la mid ah oo joogto ah oo u dhexeeya ulo iyo serifs. Sidaan sheegnay, farahaas waxaa dhiirigeliyay makiibadihii hore.
Kumbuyuutarrada ka hor, waxa aad u caan ahaa in wax lagu qoro si loo wada xidhiidho, ha ahaato labadaba waraaqo shakhsi ah iyo kuwo ganacsi, martiqaadyo, ogeysiisyo, iwm. Maanta, isticmaalkeedu wuxuu ku xaddidan yahay waqtiga qaabeynta ee buug loogu talagalay cinwaannada, ama marka aad rabto in aad siisid gabal garaaf ahaan qaab rasmi ah ama guri guri.
farta wax lagu qoro
Marka xigta, waxaanu ku tusi doonaa a xulashada farta wax lagu qoro ee kala duwan si aad tixraacyo kala duwan ugu yeelato buug-gacmeedkaaga.
Waxay soo baxday 1974-kii, oo ay gacanta ku hayaan Joel Kanden iyo Tony Stan, kuwaas oo abuuray alifbeetada isaga oo ku dayanaya farta loo isticmaalo qalabka wax lagu qoro. Waxay isku daraysaa qallafsanaanta wejiyadii hore oo leh qaab casri ah iyo mid hadda jira.
Waxa u sameeyay Howard G. Kettler 1995 IBM, nooca Courier-ka Waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan adduunka. Waxa ay ahayd far la doonayey in lagu daabaco makiinada wax lagu daabaco, waana sababta ay jilayaashiisu isku ballaadhsiiyaan, waana ta keentay in xariiqaha qoraalka lagu qoray farcan aanay isku mid ahayn, yacni xarafka m, waxa uu leeyahay. meel la mid ah sida xarafka i, tusaale ahaan. Cilladahan ayaa ah waxa ka dhigaya nooca Courier si aad caan uga ah adduunka naqshadeynta oo ilaa maanta la isticmaalo.
Adrian Frutiger ayaa dib u habayn ugu sameeyay IBM Selectic Microsoft si loogu isticmaalo shabakada. Waa far hore loogu rakibay MacO iyo Windows labadaba.
Lucida Qoraaga Qoraaga
Lucida Typewriter, waxay ka tirsan tahay qoyska Lucida. Waxaa abuuray Charles Bigelow iyo Kris Holmes 1985. Nooca noocaani wuxuu ahaa mid ka mid ah wejiyada wax lagu qoro ee dhijitaalka ah ee ugu horeeyay.
Nooca noocaani wuxuu leeyahay isbeddellada yaryar iyo kuwa daahsoon ee dhumucdiisuna waxay ku taal kuddeeda iyo wax-qabad weyn. Waa qoraal culus laakiin cad marka la akhrinayo.
Mid ka mid ah Nils Thomsen qoraalkiisa qoraalkiisa. Comspot waxay isku daydaa inay soo ceshato foomamka caadiga ah ee xarfaha mashiinka ee qorista kuwii hore, laakiin la qabsiga iyaga oo taabtay bini'aadam.
Waxaa loo naqshadeeyay 2015-kii sidii wejiga shirkadda ee Comspot, qaybiyaha hardware iyo software. Mabda 'ahaan, kaliya saddex pesos ayaa lagama maarmaan u ahaa, laakiin waxaa la ballaariyay oo laga dhigay sagaal, isticmaalka tifaftirka. Kuwaas Miisaanka waxaa dhiirigeliyay taariikhda shirkadda, asal ahaan, codsiyada barnaamijyada.
Naqshadeeyay 1990-kii Erik Spiekermann. Officina Sans waa qoraal qoraal ah oo Ujeedadu waxay ahayd in si hufan loo wada xidhiidho qaabka shirkadaha iyo xafiisyada. Iyada oo qaab ku salaysan farta makiibadihii hore laakiin leh hawo casri ah oo tignoolajiyadeed.
Farta Officina waxay leedahay laba qoys oo hoose; Officina Sans, oo aan lahayn final iyo Offica oo leh final. Markii hore, si loogu isticmaalo xafiisyada, waxay lahayd kaliya laba pesos, laakiin sida ay u kobcisay adeegsigeeda ololaha xayaysiinta, waxay u baahday inay ku darto miisaankeeda. Waa a teknooloojiyadda oo leh akhris aad u wanaagsan taasoo ay ugu wacan tahay kala fogaanshihiisa, dhererka X iyo qaababkiisa.
Waa far qoraal ah oo lacag ah, waana doorasho aad u wanaagsan marka la raadinayo farta wax lagu qoro. Qoraalka tesis ayaa leh saddex miisaan oo kala duwan, geesinimo, joogto ah iyo mid saddexaad oo la yiraahdo daal, waa tan ugu xiisaha badan seddexda tan iyo markii ay siisay xarfaha texture, iyaga oo siinaya qaab guri guri.
Gareth Hague nashqadeeyaha nooca wejiga, waa abuuraha Aminta, oo ah weji qoraal ah waxay ku midoobaan habka asalka ah, qaabka caadiga ah ee qorayaasha hore, oo leh hawada casriga ah nooca Helvetica
U dhawaanshaha u dhexeeya jilayaasheeda ayaa naga dhigaysa teleport waxayna u egtahay in aan riixeyno mid kasta oo ka mid ah furayaasha mashiinka.
Mashiinka wax lagu qoro ee la tirtiray
Naqshadeeyay mareegaha Paulo W. Erased Typewriter 2 waa a farta wax qorida oo qaab dhib badan leh, kaas oo abuura dareenka nooca mashiinka asalka ah. Fartani waxay leedahay afar miisaan si loo habeeyo naqshadeena, joogta ah, geesinimada, faaligga ah iyo hoosta.
Makiinaduhu waa mid ka mid ah agabka taranka qoraalka hore. Yaa aan xasuusan dhawaaqa mar kasta oo furaha la riixo, iyo dadaalkii ku jiray in la riixo badhan kasta si ay warqaddu ugu sii daabacdo warqadda. Aad bay u adag tahay in mar kale la maqlo oo la dareemo tan, laakiin waxaa mahad leh mareegaha farsameeyayaasha kuwaas oo nashqadeeyay xarfaha ay dhiiri galiyeen makiinadaha wax qora, waxaan dib u abuuri karnaa qaabkaas canabka ah, waxaan dib ugu laaban karnaa waqtiyadaas.
Lahaanshaha buug-gacmeedka farta wax lagu qoro waa shay lagama maarmaan u ah marka la naqshadeynayo, si loo ilaaliyo nuxurkaas hore, qaab muuqaal ah oo cufan oo xiran.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Dhiirrigelinta » 8-da Farood ee Qoraaga ugu Fiican
Mabaadi'da naqshadeynta garaafyada